musha Europe Vatambi veRugby Jonathan Sexton Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yemutambi weRugby anozivikanwa nemazita emadunhurirwa "Jonny & Iyo Rat“. Yedu Jonathan Sexton Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndimumwe wavo Irland Inonyanya Kukosheswa Rugby Possess, iyo feat iyo yakamuita kuti ahwinhe 2018 Rugby mutambi wepagore mubairo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveJonathan Sexton's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitange.
Jonathan Sexton Nyaya Yechikoro Chemwana:
Jonathan Sexton akaberekwa pazuva re11th raJuly 1985 kuna amai vake, Clare Sexton uye baba, Jerry Sexton muguta reDublin, kuIreland. Ndiye wekutanga pavanakomana vatatu uye mwanasikana akaberekerwa vabereki vake vaanoda.
Johnny akakurira mumusha wemitambo. Ivo baba vake vaive anoshanda Rugby mubatanidzwa mutambi weBeche Ranger, kirabhu yomubatanidzwa rugby muDublin, Ireland yakavambwa mu1881. Zvishoma Kuswedera pedyo kwaJohnny nababa vake kwakamuona zvakasununguka achitora akafanana nemutambo. Paaive nemakore matanhatu ezera, baba vake Jerry vakamutora kuti vaone rugby mutambo kuLansdowne Road kekutanga. Mumashoko ake;
"Ndichiri kuyeuka ndichienda pamapfudzi ababa vangu muLansdowne Road kuti ndione mitambo kekutanga. Takango famba tichidzika kubva kuna Donnybrook. Iyo ichiri imwe yeakatanga kuyeuka uye akanakisa ekuyeuka ndangariro. "
Johnny uyo aive akapfeka teeny weeny Ireland jersey akakurumidza kudanana nemitambo. Haana kuziva kuti aizove mumwe wenyika yake mukurusa akambobuda.
Jonathan Sexton Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kufunga nezvekurega basa yaive imwe yezvinonetsa zvikuru kuna baba vaJohnny Jerry. Kuti agone kubata nayo, kwete kuita kuti ikanganise musoro wake, akatanga kuda kuramba achirarama hope dzake kuburikidza nemwanakomana wake, Johnny.
Johnny akatanga kutora chidzidzo chakawanda kubva kuna baba vake paaienda kuSt Mary's College RFC. Kunzwa kwemukomana wechikoro akawana kuravira kwake kwekutanga kwerugby kuBective Ranger.
Johnny Sexton aive neziso rebhora, iro rakaiswa nababa vake Jerry. Akave zvakare neakasimba simba akaenzanisirwa nababamunini wake Wallie (aimbovawo weIrland Rugby nyeredzi).
Jonathan Sexton Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Pakutanga, akaona kuti akagadzirirwa stardom. Kuda kwaJohnny kwemutambo kwakamuona achitorwa St Mary's College Nhabvu Club, rugby mubatanidzwa mubatanidzwa wakavakirwa muSouth Dublin, Ireland. Sexton aive achimhanya mukurongedza nzvimbo muIrish rugby fikiki kuburikidza neakavimbika uye risingagone kuvezwa.
Waizviziva here?… Tachitsanangura nguva yebasa rake repakutanga paakasvika akahwina mukombe wekudonha mugore ra2002 Leinster zvikoro pakupedzisira-yakanyorova uye mumatope Lansdowne Road.
Kutamba kwaJohnny kuSt.Mary kwakaita kuti asarudzirwe Leinster, rimwe rematunhu mana enyanzvi erugby kubva kuchitsuwa cheIreland. Waizviziva here?… Leinster ndiye akabudirira kwazvo timu yeIrland mose uye mumakwikwi eEuropean.
Jonathan Sexton Nzira inoenda Mukurumbira Nyaya:
PaLeinster, Sexton akaita dhizaini yake kurwisa Border Reivers muna 2006, akave chikamu chemakunda muhwina muna 2007-08 mwaka. Pana 2 Chivabvu 2009, akazvisimbisa muchikwata cheLeinster chekutanga. Iyo Rugby yakabhururuka-hafu yakatungamira Leinster Rugby yake muCeltic League kumakundano matatu eEuropean Cups mumakore mana.
Mu2013, Johnny akatanga kuridza timu yenyika reBritain neIrish Lions, danho raive rakanzi nharo. Mwaka uyo zvakare ndakamuona achigadzira imwe shanduko yekuita nhangemutange 92 muzita rekutora £ 540,000-gore-gore izvo zvakaita kuti vamwe vateveri vanzwe kuti akanyengerwa nemukurumbira.
Jonathan Sexton Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Kumwe kufungidzira kwakanyanya kwekuuya kwakauya muzhizha re2014 apo Johnny Sexton akazivisa munaGunyana gore iro kuti anga asaina chibvumirano chekumudzosa kuLeinster.
Mumwaka wa2017–2018, Sexton akarova zvibodzwa zvishanu uye makumi maviri nematanhatu mapoinzi aLeinster. Mukuita uku, akazove mukwikwidzi wepamusoro-soro mubodzwa wenguva dzese. Izvi zvakateverwa naiye kuwana korona yeWorld Rugby Player yeGore mu5. Waizviziva here?… Johnny akambove ari musanangurwa wekupa mubairo mu2014.
Johnny Sexton akazova wechipiri weIrish mutambi munhoroondo kuhwina mubairo, mushure Keith Wood mugore 2001. Sezvo panguva yekunyora, Jonathan Sexton achiri mumwe weakanakisa kubhururuka-hafu pasirese, nekuda kwekubatana kwake kunoshamisa kwakasimudzirwa kwehunyanzvi uye simba. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Jonathan Sexton Hukama Hupenyu Chokwadi:
Kumashure memutambo weRugby wakabudirira, panombove neanodakadza musikana. Jonathan Sexton akatanga kuvengwa kuti ave nemusikana mumunhu waLaura (aimbova musikana wa Justin Beiberi zvinoenderana Wattpad). Kune vazhinji vateveri, 2005 raive iro gore vaviri vachiri kuyaruka vakatanga kufambidzana.
Mune gore 2014, Sexton akafunga kutora danho rakashinga nekuroora iye mwana wake mudiwa. Jonathan naLaura vakaroora mu2013 kuAdare's 13th century Holy Trinity Church iri kuAdare, kuIreland.
Pamwe chete, vaviri ava vane vana vashanu kureva; Luca, Amy, Sophie, Chase naKaterina Sexton. Laura Sexton, anoshanda semudzidzisi ane tsika yekuita kuti zvinhu zviitwe uye anotsigira tsigiro yakasimukira kumurume wake uye nevana vanonaka.
Jonathan Sexton Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Kuziva Jonathan Sexton Yemunhu Hupenyu kure nemabasa ake ebasa achakubatsira iwe kuti uwane mufananidzo wakazara wake.
Kusangana naye, iwe unozoona iye munhu anonyara uyo anotaura zvinyoro uye anogona kunyanya kusanzwika pane dzimwe nguva. Pakadzika pasi, Johnny zvakare ari pasi-pasi-pasi uye nemanzwiro uye mukomana. Mukurumbira uye kutarisisa kwese kwaakabata pamusoro pemakore hakutorere kwaari kuve mutambi.
Jonathan Sexton Hupenyu hwemhuri:
Nguva refu yakapfuura, Johhny Sexton aifarira kuvimbisa mhuri yake, pamwe nekumwe kuzorora (kunzwa kusimbiswa kwakakwana dzimwe nguva pazvinhu zvisina kukwana) kuti aizo pfeka iyo yeIrish green yehembe rimwe zuva. Kune vamwe vemhuri, paigara painezvishoma dhiabhori maari".
Pamusoro paBaba vake: Baba vaJonathan Sexton vaimbova mutambi weRugby uyo mushure mekurega basa akaramba achirarama zviroto zvake zveRugby kuburikidza nevakomana vake vaviri (Jerry naJohnny).
Pamusoro paamai vake: Jonathan Sexton amai vaClare muchengeti wemba uye mugadziri wevhudzi anomhanyisa inozivikanwa Rathgar Bvudzi Salon, kumaodzanyemba kweguta guru. Anobatsira zvakare Brenda Sexton ambuya vababa vemwanakomana wake nekutengesa mbatya.
Vana vaJonathan Sexton: Johnny ane vanun'una vatatu vanoenda nemazita; Jerry, Maka naGillian Sexton. Maka aive murume wepamoyo waJohnny ukuwo Jerry aive mumwe wevaiperekedza zvikomba.
Munun'una waJohnny, Jeremiah aka Jerry Sexton (akazvarwa 20 Ndira 1993) sapanguva yekunyora mutambi wetsiva wevatambi anotambira divi reSouth Africa maSouthern Kings. Kunge hama yake, akamiririrawo Leinster Rugby semwana wechikoro.
Kusiyana naJerry, vese Mako naGillian vakaita nhamburiko yekunzvenga veruzhinji, kurarama hupenyu hwakavanzika.
Vanasekuru vaJonathan Sexton: Vamwe veasekuru vake vachiri vapenyu senge panguva yekunyora. YaJonathan ambuya, Brenda Sexton, vanomhanyisa bhizinesi rekupfeka remhuri muListowel, taundi reGugu uye taundi remusika muK County Kerry, Ireland.
Jonathan Sexton Mararamiro:
Kugadzira mutsauko pakati pekuita zvinoshanda mudhara uye kuva nehupenyu hwakanaka hachisi chisarudzo chakaoma kuita. Kuve muIreland Rugby wepamusoro unowana ne € 650,000 pamwaka (senge panguva yekunyora) zvinoreva mari zhinji kurarama hupenyu hwakajairika.
Munyika yemazuva ano yeRugby yemota dzinopenya, dzimba hombe uye midhiya enhau, Johnny Sexton haasi iye mushonga unozorodza sezvo achirarama hupenyu hwakanaka.
Untold Chokwadi Nezve Jonathan Sexton:
Kugara muConstant Worry: Mushure mekupupurira zvakaitika kuna Jamie Heaslip, mutambi wemuIrbby mubatanidzwa aimbotamba Leinster neIreland, Johnny akaramba achirarama achitya kuti anogona kutora nguva isati yakwana.
Johnny Sexton anorarama hupenyu hwake achiramba achinetseka nezvekukuvara izvo zvinogona kumuita kuti abve pachinzvimbo. Iye anofunga wese Mutambi weRugby kusanganisira iye kungori kukuvara kure nekusazombokwanisa kutamba mutambo zvakare. Mumashoko ake;
"Ndazviona izvozvo nevamwe vatambi. Jamie Heaslip Akatamba yakawanda isingadaviriki yemitambo uyezve mune imwe chiitiko, haatambe zvakare. Ingori imwe chete isingafadzi yekubata kwehomwe, kwete kunyange mumutambo, asi panguva yekudzidziswa. Kufunga nezveizvi ndiko kunetseka kukuru kwandiri. "
Akadzidziswa Zvakanyanya: Vashoma kwazvo vanobudirira mumitambo vangaramba kuenderera mberi nedzidzo kana vaita mari. Nekudaro, Johnny Sexton haasi mumwe wavo. Waizviziva here?… Anobata degree reBachelor of Commerce kubva kuUniversity College Dublin.
Chitendero chaJonathan Sexton: Johnny Sexton anonamata uye ane kutenda muna Mwari. Akarerwa mumhuri yechikatorike. Pakutanga achiri mudiki, sekuru vake pamwe nasekuru vake vakaita kuti aende kuungano yechi Katoliki padivi pevabereki vake muDublin.
CHOKWADI KUTI: Thanks for readingu yedu Jonathan Sexton Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!